Xannaanada carruurtu waa fursad barbaarin | Samfunnskunnskap.no
Xannaanada carruurta ilmuhu wuxu ka bartaa waxyaalo badan:
Waxey carruurtu waayoaragnimo ka helaan iney carruurta kale la joogaan.
Waxey bartaan tixgelinta dadka kale.
Madaxbannaanidooda ayaa sii korodha.
Waxa sii korodha aqoontooda.
Waxa si wanaagsan loogu sii diyaariyaa bilowga iskuulka.
Shaqaalahu waxey waqti badan siiyaan diyaarinta waxa carruurtu ay ku baran lahayd xannaanada. Markey qorsheynayaan hawlahan waa iney adeegsadaan sharciga u dejisan xannaanada iyo sharciyada iyo qorsheyaasha kale ee ey dawladu dejisey.
Waalidku waxey xannaanada ka helaan warbixin ku saabsan ujeedooyinka shaqada ee xannaanada iyo madadaalooyinka ay carruurtu ka qeybqaadan karaan.
Waalidiinta waxa loogu yeedhaa kulan waalidiinta oo dhan ah iyo mid wadahadal keli keli ah. Kulankaas waalidiintu wey isku bartaan waxeyna ka wada sheekeystaan sida ey tahey in carruur yaryar la yeesho. Waalidiinta aan aqoonin afnoorwiijiga waxey xaq u leeyihiin turjubaan marka shir waalidiinta ahi dhacayo.
Golaha shacabka ayaa sannad kasta gooya qiimaha ugu sareeya ee laga bixinayo xannaada carruurta ee Norwey. Ma jiro waalid bixinaya qiimahaas la gooyey wax ka badan. Qiimahani wuxuu khuseeyaa xannaanada dawliga ah iya xannaada gaarka loo leeyahay labadaba. Waxa iman kara kharashyo dheeraad ah oo ku baxa cuntada, safarada iyo waxyaalo kale.
Haddii aad su’aalo qabto eeg:
Si kastaba ha ahaatee qiimaha laga bixiyo ilmaha dhigta xannaanada carruurta wuu kala duwan yahey degmo ka degmo. Degmooyinka qaarkood reerka dakhligoodu yar yahey waxey codsan karaan qiimo dhimis, halka degmooyinka qaarkoodna qiimuhu isku wada mid yahey dadka oo dhan iyada oo aan la eegin dakhliga. Degmooyinka qaarkood qiimaha waxey ka dhimaan haddii dhowr carruur ah oo walaalo ah ay xannaanada wada tagaan halka degmooyin kalena aaney lahayn nidaamkaas oo kale.
Xannaanada khasab ma aha, laakiin ku dhawaad dhammaan carruurta Norwey joogtaa way tagaan xannaanada ka hor inta aanay iskuulka bilaabin.
Qiyaastii boqolkiiba 90 ee dhammaan carruurta u dhaxaysa hal iyo shan sanno way tagaan xannaanada.
Xannaanadu waa in ay raacaan waxa ku qoran sharciga xannaanada. Markaa waa in shaqaaluhu raacaa sharciga marka ay qorshaynayaan hawlaha ay ku qabanayaan xannaanada.
Ma aha lacag la’aan in carruuri kuu tago xannaanada. Waalidku waxa ay bixinayaan qaybtooda bil kasta, se inta hadhay eeqiimaha boosku yahay waxa bixinaysa dawladda.